Free COVID-19 Protection | Prudential Myanmar ', // '', '', '', // '', // '', ], }); }); bigBanner.parallax(); });
ပရူဒန်ရှယ်အာမခံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အသက်အာမခံ အကာအကွယ်
အစီအစဥ်ကာလ၊ ဧပြီ ၁၁ မှ ဇူလိုင် ၁၁ ၊၂၀၂၀။
အာမခံထားပြီးသူများသာမက အသစ်အာမခံထားလိုသူများ (တစ်ဦးချင်းအတွက်သာမက အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပါ) အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 အတွက် ရက် ၉၀ အာမခံအကျိုးခံစားခွင့် သက်တမ်းသည် ပေါ်လစီစတင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစတင်၍ လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) အစီအစဥ်စတင်သည့် နေ့ရက် မှစတင်၍လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့အနက် နောက်ဆုံးဖြစ်ရာ
အာမခံထားသူသည် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ရောဂါလက္ခဏာကို တွေ့ရှိကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပေါ်လစီတွင် ပါရှိသော အာမခံထားငွေ၏ ၁၀%ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး ၅ သိန်းအထိ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
အာမခံထားသူသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အာမခံထားငွေ၏ ထပ်ဆောင်း ၁၀၀% ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး သိန်း ၅၀ အထိ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။အသစ်ဝယ်ယူမည့်သူများအနေဖြင့် “စောင့်ဆိုင်းကာလ ၁၄ ရက်” သတ်မှတ်ချက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ။ ။ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှ ဝယ်ယူသည့်သူများ အတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်)
ဥပမာ (၁) အာမခံ ဝယ်ထားပြီးသူ
ဦးအောင်သည် PRUTermပေါ်လစီကို အာမခံထားငွေ သိန်း ၃၀ ဖြင့် ဧပြီ ၂ရက်နေ့ တွင်စတင်ဝယ်ခဲ့ပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ရရှိမည့် အကျိုးခံစားခွင့်
ရောဂါလက္ခဏာ အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၃ သိန်း (သိန်း ၃၀ ၏ ၁၀%)
အသက်သေဆုံးခြင်းအတွက် ထပ်ဆောင်း အကျိုးခံစားခွင့်။ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၃၀ (အာမခံထားငွေ နှင့် ညီတူညီမျှ)
ဥပမာ (၂) အသစ်အာမခံထားမည့်သူ
ဒေါ်မြ သည် PRUTermပေါ်လစီကို အာမခံထားငွေ သိန်း ၅၀ ဖြင့် ဇွန် ၁ရက်နေ့ တွင်စတင်ဝယ်ခဲ့ပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာ အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅ သိန်း (သိန်း ၅၀ ၏ ၁၀%)
အသက်သေဆုံးခြင်းအတွက် ထပ်ဆောင်း အကျိုးခံစားခွင့်။ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၅၀ (အာမခံထားငွေ နှင့် ညီတူညီမျှ)
COVID-19 Free Insurance Coverage by Prudential Myanmar Life Insurance
Campaign Period is from 11th April to 11th July 2020
Applicable to ALL customers (both individual and corporate customers), including both existing and new customers
The period of the COVID-19 free insurance coverage is 90 days from the issue date of the policy or the start date of the campaign, whichever is later.
Note: There will bea“waiting period” of 14 days that will apply only for new customers (i.e. customers who are onboarded after 11th April 2020).
Illustrative Example 1 (Existing Customer)
U Aung boughtaPRUTerm policy of Sum Assured3million MMK on 2nd April.
Free COVID-19 benefits:
Diagnosis Benefits: MMK 300,000 (10% of3mil)
Additional Death Benefit: MMK 3,000,000 (equal to policy sum assured)
Illustrative Example2(New Customer)
Daw Mya boughtaPRUTerm policy of Sum Assured5million MMK on 1st June.
Diagnosis Benefits: MMK 500,000 (10% of5mil)
Additional Death Benefit: MMK 5,000,000 (equal to policy sum assured)